‘बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा’- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
‘बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा’
वीरगन्ज — प्रदेश २ सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बारेमा वीरगन्जका सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । धेरैले वीरगन्ज र पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
विश्लेषक मनोज उपाध्यायले बजेटले प्रदेशवासीलाई उत्साहित पार्न नसकेको बताए । वीरगन्जको पोखरिया अस्पतालको सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो भए पनि कोरोनाले प्रभावित सर्वसाधारण र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई तत्काल राहत हुने गरी योजना र कार्यक्रम घोषणा हुन नसकेको उनले भनाइ छ । ‘प्रदेश २ का ८ लाख ४० हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । मुलुकको कुल विप्रेषणमा झन्डै १२/१३ प्रतिशतको हिस्सा यस प्रदेशले ओगटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने र सँगसँगै ग्रामीण उद्यमशीलता कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेबारे बजेटले बोल्नुपर्थ्यो ।’ पर्यटन, सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारबाट लगानी भित्र्याउने कार्यक्रम र निजी क्षेत्र मैत्री लगानी नीति आउन नसकेको उनले बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको बताए । लगाउने वातावरण मिलाउन सरकारले केही कदम चालेको छैन । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धनमा नारा मात्रै देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सीपमूलक र पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको सोच कहीं देखिएन । धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भाव्यता हुँदाहुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्मका पर्यटकलाई तान्न पहल देखिएन,’ उनले भने ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले पोखरी र मठमन्दिरको सौन्दर्यीकरण गरेर मात्र प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने बताए । ‘प्रदेशकै एक मात्र निकुन्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्यटकको आगमन बढाउन प्रदेश सरकारले के कस्तो लगानी गर्छ अनि प्रदेश २ कै शक्तिपीठ गढिमाईलाई पनि धार्मिक पर्यटनस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि बजेट मौन छ । देशकै आर्थिक राजधानी वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । उद्योगी मनोज दासले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन भएको आरोप लगाए ।
प्रदेश २ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गणेश लाठले सबैलाई खुसी पार्न अलि अलि बजेट बाँड्ने काम भएको टिप्पणी गरे । गत वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा यस वर्ष फेरि खर्च होला भन्नेमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तरकारी बजार, सौर्य ऊर्जा, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, राज्यस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बजेट बिल्कुल मौन छ । साहित्य क्षेत्रमा शून्य विनियोजन छ । स्वरोजगारमा केही रकम विनियोजन गरिएको छ त्यो सकारात्मक हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : असार ५, २०७८ ११:३७
असार ५, २०७८ रीना मोक्तान
समाजले छोरीहरुका लागि नियमहरुको पर्खाल बनाइदिएको छ । त्यस्तो पर्खाल जसले उनीहरुको सपनालाई भित्रभित्रै खुम्चाइदिएको छ । त्यसैले त सपना देख्ने आँट गर्दैनन् उनीहरु । न त देख्न नै सक्छन्, समाजले बनाइदिएको नियमभन्दा परको संसार ।
तर फिल्म 'स्केटर गर्ल'ले एउटा यस्तो किशोरीको कथा भन्छ जसले यी नियमहरु तोडेर सपनाको उडान भर्छिन् । समाजले तोकिदिएका बन्धनहरु नाघेर हावामा तैरिन सिक्छिन् ।
'स्केटबोर्डिङ'मा अन्य खेलमा झैं नियम हुँदैन । नियम बिनाका खेल कति स्वतन्त्र र आनन्दायी हुन्छ?, 'स्केटबोर्डिङ' गर्न थालेसँगै प्रेरणा भीलले जीवनमा त्यो आनन्द महसुस गर्छिन् । 'स्केटर गर्ल' स्वतन्त्र हुन चाहनेहरुको कथा हो । अनि, छोरीहरुलाई सपना देख्न प्रेरित गर्ने कथा पनि ।
यो राजस्थानको एउटा गाउँ खेमपुरमा सेटिङ गरिएको फिल्म हो । फिल्मकी प्रमुख पात्र प्रेरणा बुवालाई सघाउन बजारमा बदाम बेच्छिन् । घरको काम गर्छिन् । घाँस दाउरा गर्छिन् । भाइ अंकुशलाई विद्यालय पुर्‍याउँछिन् । घरकै कामहरुमा व्यस्त हुँदा विद्यालय छुटिरहन्छ । विद्यालय जाने मौका पाउँदा पुरानो पोसाक छोटो भइसक्छ । उनी पोसाक नभएकै कारण विद्यालय जान बन्द गर्छिन् । एकदिन गाउँमा भ्रमणका लागि लन्डनबाट खेमपुर आएकी जेसिकासँग उनको भेट हुन्छ । जेसिकाले प्रेरणा र गाउँका सबै बच्चाहरुका लागि स्केटबोर्ड किन्दिन्छिन् । स्केटिङ गर्न थालेसँगै प्रेरणाको अँध्यारो जीवन उज्यालो हुँदै जान्छ । आफ्नो उमेरसमेत थाहा नभएकी प्रेरणाले गाउँमै आयोजना हुन लागेको स्केटबोर्डिङ प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सपना देख्छिन् ।
दलित भएकै कारण उनी कथित माथिल्लो जातको धारो चलाउन सक्दिनन् । घरमा बुवा, विद्यालयमा शिक्षकसँग ठाडो शिरमा बोल्न सक्दिनन् । घर र समाजको नियमहरुमा बाँधिएकी उनले स्केटबोर्डिङ प्रतिस्पर्धासम्मको यात्रा कसरी तय गर्छिन् फिल्म यसैमाथि घुमेको छ ।
फिल्ममा 'स्केटबोर्डिङ'ले देहातकी एक किशोरीमा के-कस्ता परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मात्र देखाएको छैन । खेमपुरभित्रको जात व्यवस्था, बाल-बिबाह र जकडिएर बसेको पितृसत्ता देखाउँछ । प्रेरणाकी आमा सिलाइ गर्न चाहन्छिन् । तर उनको पति पत्नीलाई घर बाहिरको काम गराउनु आफ्नो बेइज्जी ठान्छन् । पत्नीको प्रस्तावले उनको पुरुषको अहंममा यसरी चोट दिन्छ कि उनी पत्नीलाई जवाफमा भन्छन,'मेरो हात खुट्टा अझै चल्छ । पत्नीलाई बाहिर काममा पठाए अरुले मलाई के भन्छन् ?'
एक साँझ प्रेरणाले 'स्केटिङ' अभ्यास गरिरहेको देख्दा 'महिलाले पुरुषको खेल खेल्न नहुने' भन्दै हकार्छन् । त्यति मात्र होइन स्केटिङ गरेसँगै प्रेरणाले 'पुरुष व्यवहार' सिकेको भन्दै जेसिकालाई गाली गर्छन् । पुरुषप्रधान सोचलाई उनको बुवाको चरित्रले छर्लङ्ग पारिदिन्छ । 'स्केट पार्क' बनाउने योजना लिएर एक मन्त्री भेट्न जाँदा जेसिकालाई उल्टै सोधिन्छ,'यो प्रोजेक्टमा वास्तवमा को-को संग्लन छन्, बुवा कि बुढा ?' मन्त्रीको प्रश्नले पनि पुरुषवादी चिन्तन दर्साउँछ ।
प्रेरणाको कथासँगै फिल्ममा जातिय विभेदका विषयलाई पनि उठाएको छ । विद्यालयको एक शिक्षक आफ्नो छोरालाई प्रेरणासँग घुलमिल भएको देख्दा आफ्नो जात बराबरसँग संगत गर्न लगाउँछन् । गाउँमा कथित तल्लो जात र माथिल्लो जातका लागि छुट्टाछुट्टै धारो राखिएको छ । एकपटक माथिल्लो जातको चौतारामा जेसिका प्रेरणालाई बस्न लगाउँछिन् । प्रेरणा आफु सानो जातको भएको कारण देखाउँदै त्यहाँ बस्न अस्विकार गर्छिन् । 'अझै मानिसहरु यस्तो मान्छन् र ? भन्दै जेसिकाले प्रश्न गर्दा प्रेरणाले घतलाग्दो जवाफ दिन्छन्,'बोलेरै त केही गर्दैनन् । तर मान्छन् सबै ।' प्रेरणाको जवाफले जातिय विभेदलाई मुखले हटाउनुपर्छ भन्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई पछ्याउनेहरुलाई प्रहार गर्छ ।
'स्केटबोर्डिङ'ले जातिय विभेदमाथि व्यंग्य गरेको छ । स्केटिङ गर्न थालेसँगै गाउँका कथित तल्लो जातका बालबालिकाहरु जान नमिल्ने स्थानहरुमा खेल्न थाल्छन् । कथित माथिल्लो जातका बालबालिका पनि उनीहरुसँग स्केटिङ गर्न थाल्छन् । स्केटिङले बालबालिकाबीच उम्रँदै गरेको जातिय विभेदलाई छिमल्ने प्रयास पनि गरेको छ । प्रेरणाले स्केटिङ गर्ने प्रेरणा पाएसँगै गाउँमा यो सुरुवात भएको छ ।
मन्जरी म्याकीज्यानी निर्देशित यो फिल्मले समाजका 'प्रेरणाहरु'लाई पखेटा फिजाएर उड्न प्रेरणा दिन्छ । 'स्केटर गर्ल'ले प्रेरणाहरुलाई सपना देखाउन प्रेरित गर्ने जेसिका र एरिक(जेसिकाको साथि जसले स्केटिङ सिकाउँछ)को कथा पनि भन्छ । प्रेरणाले स्केटिङका लागि गर्ने संघर्षहरुसँगै बग्ने जेसिका र एरिकको कथाले फिल्ममा दर्शकलाई जोडेर राख्छ । उनी दुईको कथालाई पटकथाकारसमेत रहेकी मन्जरीले राम्रोसँग फिल्ममा बुनेकी छिन् । फिल्ममा पात्रहरु झट्ट देखिने र हराउने हुँदैनन् । सबै पात्रको चरित्र निर्माण र 'सेफ ल्यान्डिङ'मा निर्देशक म्याकीज्यानीले ध्यान दिएकी छिन् ।
फिल्ममा दिदीको भाइको सम्बन्धलाई मिठो तरिकाले पस्किएको छ । हुर्कँदै गरेको किशोर/किशोरीको प्रेमलाई पनि सुमधुर ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्ममा बैजनी रंगलाई कलात्मक ढंगले प्रयोग गरिएको छ । अंकुशको बियरिङ गाडी(स्केटबोर्ड जस्तै देखिने खेलौना)लाई तान्ने डोरी बैजनी रङ्गको छ । जब प्रेरणा स्केटबोर्डिङमा ड्रप इन गर्ने तरखरमा हुन्छिन् बैजनी रंगको प्रकाशको किरण उनीमाथि परेको देखाइन्छ । यो रंग साहसको प्रतिक हो । समाज र परिवारले बनाइदिएको नियमहरुलाई तोडेर सपना देख्ने साहस गर्ने प्रेरणालाई पक्कै यो रंगले प्रतिबिम्व गर्छ । यो रंगलाई फिल्मका अन्य दृश्यमा पनि कलात्मक रुपले प्रयोग गरिएको छ ।
समग्रमा फिल्मले प्रेरणाको कथालाई सुरिलो ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । प्रेरणासँगै अन्य पात्रहरुको कथा फिल्ममा बगेको छ । मञ्जरीले पात्रहरुबीचको स-साना भावनाहरुलाई मार्मिक ढंगले निर्देशन गरेकी छिन् । फिल्ममा प्रयोग गरिएका संगीतले कथा र पात्रहरुलाई झनै शसक्त बनाएको छ ।
राचेल संचिता गुप्ताले प्रेरणाको भुमिकामा तारिफ योग्य अभिनय गरेकी छिन् । फिल्ममा रानीको छोटो भुमिका निभाएकी वहिदा रेहमानको अभिनय दुरुस्त छ । जेसिकाको भुमिकामा देखिएकी अम्रिता मेघारा, अंकुशको भुमिका निभाएका सफिन पटेलको अभिनय जीवन्त लाग्छ । 'द लास्ट मार्बल' र 'द कर्नर टेबल'पछि निर्देशक मञ्जरीको यो डेब्यू फिचर फिल्म हो । स्पोर्ट्रस ड्रामा 'स्केटर गर्ल'मार्फत समाजको पितृसत्ता र जातिय विभेदको तस्वीर देखाउँदै प्रेरणाको कथा भनेकी मञ्जरीको यो डेब्युले बलिउडमा उनको दमदार इन्ट्री गराएको छ । यो फिल्म जुन ११ देखि नेटफ्लिक्समा प्रदर्शनमा आएको हो ।
प्रकाशित : असार ५, २०७८ ११:२८
प्रदेश कानुन बने, कार्यान्वयन भएनन्